ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း ~ Nge Naing
ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
Thursday, November 18, 2010 Nge Naing5comments
ဗိုလ်နေဝင်း၏ စစ်အာဏာစက်အား ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အုံကြွမှုကြီးဖြင့် တိုက်ချလိုက် စဉ်က ဦးဆောင်သူများမှာ အတွေ့အကြုံ နုနယ်သည့် ကျောင်းသားများက အများစုဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်ထက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ကြားမှု Heroism ကို ဦးစားပေးခဲ့ကြခြင်း၊ အတွေ့ အကြုံရှိသော လူကြီးများက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဦးတည်ပြီး သူအိမ်ရှေ့ကဝင်ရင် ငါနောက်ဖေးက ထွက်မည်ဟု မာန်မာန အာဃာတကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့် လက်တကမ်းအလို ပြည်သူလိုလား သည့် အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ခြေမှ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
တဖန် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် ညစ်ပတ်မှုများကြားမှ NLD အနိုင်ရလာသည့် အခါတွင်လည်း လက်နက်မဲ့ပြည်သူအင်အားကို တဖက်သတ်အားကိုး၍ တင်းမာရေး လမ်းစဉ်ကို လိုက်ပါခဲ့ကြပြန်သည်။ ဦးကြည်မောင်၏ (Off the record) ထုတ်ပြန်ရန် ခွင့်မပြုသော ပြောကြားချက်ဖြစ်သည်၊ “အကယ်၍ အစိုးရဖွဲ့ပြီးလျှင် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို နုရင်ဘတ်ခုံရုံး ကဲ့သို့ စစ်ခုံရုံးတင်၍ စစ်ဆေးမည်” ဆိုသည့် စကားကို သတင်းထောက် ဒိုမီနစ်ဖေါ်ဒါက စည်းကမ်းဖောက်၍ ရေးသားခဲ့ခြင်းကြောင့် တပ်ခေါင်းဆောင်များက NLD ကို အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးချင်မှုအပေါ် အသုံးချရန်အတွက် အကြောင်းပြချက် ရရှိသွားခဲ့ပြီး အာဏာလွှဲပြောင်းပေးချင်သော တပ်တွင်းရှိ Moderate အလယ်အလတ်ပျော့ပြောင်းသူ စစ်ခေါင်းဆောင်များကို Radical တင်းမာသူများဘက်သို့ ကူးပြောင်းထောက်ခံစေခဲ့သည်။
တဖန် ဦးနေဝင်း ဝင်ရောက်ဖြန်ဖြေပေးလျှင် တပ်နှင့် NLD ကြားတွင် တင်းမာနေမှုကို အဆုံးသတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသော ကျွန်ုပ်၏ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး စာတမ်း Charter97 ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ၎င်းတို့၏ လက်မှတ်များကို လိမ်ယူပါသည်ဟု ပြည်ပခေါင်းဆောင်အချို့မှ ဆိုကြသည်၊ အကြောင်းမှာ သတင်းဋ္ဌာနတခုမှ ဒီစာတမ်းဟာ ဦးနေဝင်းကို ဖားနေတာဟု သွေးထိုးလိုက်သဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆိုသူများက ကြောက်အားလန့်အားနှင့် သူတို့ လက်မှတ်ကို ညာယူပါသည်ဟု ဗြောင်လိမ်ကြသည်။ ထောင်ကျဘက် တဦးကလည်း “နေဝင်း ပေးမှ ဒီမိုကရေစီရရင် မယူဘူးကွ” ဟု ရန်တွေ့တာ ခံရဘူးသည်။ ကျွန်တော့အနေနှင့် ယမမင်းက ဒီမိုကရေစီးပေးရင်လည်း ယူရမှာဘဲ ရဘို့လုပ်တာမဟုတ်လား၊ ဘယ်သူ ပေးပေးပေါ့။ ထိုအချိန်က ဦးနေဝင်းသည် အနားယူနေသော်လည်း တပ်တွင်း၌ သူ၏ သြဇာရှိနေသေးသည်။ NLD လူငယ်များ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဦးနေဝင်းကို ဒေါ်စုခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖိတ်ကြား ဘူးသည်ကို ဖတ်ရတော့ ပြုံးမိပါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ NLD လူငယ်များကို ဝေဘန်မှုများ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအတွင်း၌ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါ်စုခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ထိုလူငယ်များ ပြဿနာ မတက်ခဲ့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမုန်းတီးမှုကို အခြေခံ၍ စဉ်းစားသော အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ် များသည် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးလေ့မရှိပါ။ ခါးသည်းမှု၊ မုန်းတီးမှုတို့ဖြင့်သာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတတ်သည်ကို သတိပြုမိကြဖို့ လိုပါသည်။
ယနေ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်သူတို့က ဝင်ကြသည်။ ကန့်ကွက်သူတို့က ကန့်ကွက်၍ သပိတ်မှောက်သူတို့က သပိတ်မှောက်ကြသည်။ ကျွန်တော်သည် ၂၀၁၀ ကို လုံးဝဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သူဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတမှုမရှိခြင်း၊ မဲလိမ်မဲခိုးခြင်း၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရသူတို့အား ဗြောင်ကျကျ မဲလိမ်၍ တဖက် သတ် ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှ အနိုင်ရပါသည်ဟု ကြေငြာခြင်းတို့ကြောင့် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီ များက ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတမှု မရှိသဖြင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အသိအမှတ်မပြုကြောင်း လက်မှတ်မထိုးနိုင်ဟု တညီတညွတ်တည်း ဆိုလာခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆန့်ကျင်သော်လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းမှ အမြတ် ထွက်မှုများရှိကြောင်းကိုတော့ ရဲရဲဝန်ခံနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ အမြတ်ထွက်ခြင်း
(၁) ဘာတွေများ မြတ်လို့လဲဗျ? ဟု မေးလာလျှင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေခဲ့ကြရသော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကြောင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိ ပေါ်ပေါက် လာသော နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်များ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီသစ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်းသည် ပထမရရှိသော အမြတ်ဖြစ်သည်။
(၂) ထိုနိုင်ငံရေးပါတီများက လူထုကြားတွင် ထိုးဖောက်စည်းရုံးခွင့်ရရှိလာခြင်း၊ ပြည်သူတို့ ၎င်းတို့၏ အတွေးအခေါ်ဝါဒများကို ကန့်သတ်မှုများကြားမှ ထုတ်ဖော်ခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်ရခြင်း သည် ဒုတိယအမြတ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုနိုင်ငံရေးပါတီများက ရွေးကောက်ပွဲကို တရား မျှတမှု မရှိသဖြင့် အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဟု ကန့်ကွက်လာသော်လည်း ၎င်းပါတီများကို ထိုကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်းကို အစိုးရတွင် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိချေ။ ထိုအချက်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် အားသာချက်တရပ်အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ သည်။
(၃) တတိယ အမြတ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲသည် ညစ်ပတ်မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ စည်းရုံးသွားခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးသော အမြတ်ဖြစ်သည်။
NLD ၏ အခန်းကဏ္ဍ
NLD ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲကို မယုံကြည်၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပေဒကို လက်မခံနိုင် သဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်သားစွာ သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလတွင် ၎င်းတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ တပြိုင်နက်တည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်သူလူထုကြီးမှ လွန်စွာအားတက် မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တဖက်မှလည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် စံတင် လောက်သည့် အရှက်ကင်းမဲ့သည့် မဲလိမ်မဲခိုးမှုကြောင့် စုစည်းလာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဦးဆောင်ပြီး သဘောထားကြီးကြီးဖြင့် ကမ်းလှမ်း ပူးပေါင်းသင့်သည်ဟုမြင်သည်။ NDFသည် ဖောက်ပြန်သည့် အင်အားစုမဟုတ်၊ NLD ၏ အင်အားစု အစိတ်အပိုင်းအနေဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်။
ဗိုလ်နေဝင်းလက်ထက် အာဏာသိမ်းခြင်း၏ အကြောင်းရင်းခံမှ ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲသွားမည် စိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟု အကြောင်းပြခဲ့သည်၊ ထိုကြောင့် ဖယ်ဒရယ်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်ပြိုကွဲအောင် ပြုလုပ်မည့် စံနစ်ဟု လူထုကို လှည့်ဖျား ခြိမ်းခြောက်ထားခဲ့သည်။
ဗိုလ်နေဝင်းလက်ထက်တွင် ပြည်တွင်းစစ် မငြိမ်းခဲ့ပါ။ ယနေ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ထက် တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသည့် အဖွဲ့ကြီးများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပြိုကွဲရန် တာစူလျက်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။ DKBA နှင့် မြဝတီ၊ ဘုရားသုံးဆူတိုက်ပွဲတို့က ပြည်တွင်းစစ် အရှိန်နှင့် တောက်လောင်တော့မည်ဟု မီးနီပြနေပြီဖြစ်သည်။
၈၈ ကျောင်းသားများ တောခိုလာပြီးနောက် ဖယ်ဒရယ်မူကို အများပြည်သူ သိရှိနား လည်လာရန် တဆင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့သလို တိုင်းရင်းသား အစွန်းရောက်မျိုးချစ်များကိုလည်း သီးခြားနိုင်ငံထူထောင်လိုမှုကို ရုတ်သိမ်းစေရန် ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ပြည်တွင်းရှိ အဓိကပါတီ NLD က ဖယ်ဒရယ်မူကို လက်ခံစကားပြောလာသဖြင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်း ဆောင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလာခဲ့ကြသည်မှာ အားတက် စရာပင် ဖြစ်သည်။
ကချင်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာတူးဂျာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်ကြောင်း ပင်လုံ ဒုတိယညီလာခံ ပြုလုပ်မှာကို ထောက်ခံကြောင်း ဆိုခဲ့သလို၊ ရှမ်းတောင်ပိုင်း SSA ခေါင်းဆောင်ကလဲ ယုံကြည်ကိုးစားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။ ထို့အတူ ဝခေါင်း ဆောင်များကလဲ NLD ကို ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားဘူးသည်။ KNU နှင့် မွန်ခေါင်းဆောင် များကလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တမျိုးသားလုံးကို စည်းရုံးပေးနိုင်မည့် ခေါင်းဆောင် အဖြစ် မြင်ကြသည်။ ထို့အတူ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်တွေ နိုးထလာတယ်။ ဇီုမီးအမျိုးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖုရှင်းထန်က ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်၊ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်တွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာရှိတယ်ဟု ပြောခဲ့ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းကလည်း ပြည်ထောင်စု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အကောင်းမြင် တယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ KIO ဗိုလ်မှုးချုပ် ဂွမ်မော်ကလည်း ရှေ့မှာ တယောက်နဲ့ တယောက် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အမှားတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြီး ကရင်နီအမျီုးသား တိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခူးထယ်ဗူးတယ်က ကရင်နီအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတာကို ကြိုဆိုတယ်၊ ဖယ်ဒရယ်ကို အားပေးမယ်၊ ထောက်ခံမယ်လို့လည်း ယုံကြည် တယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ ထိုကဲ့သို့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကရော၊ တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များက ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရော၊ သူမ၏လုပ်ရပ်အရပါ ယုံကြည်မှု ရှိနေကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တောက်လောင်နေခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ကို ငြိမ်းအေးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် တဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မြင်သည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် တပ်မတော်သားများက ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့ ကြသည်။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် တပ်မတော်သားများ ရိက္ခာဖူလုံစွာ ရရှိခဲ့ကြသည်။ သာမန်စစ်သားများအတွက် အထူးဆိုင်များမှ လျော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ တွင် ကြည့်လျှင် တဝက်ဈေးနှင့် ကြည့်ခွင့်ရကြသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွင်းစစ်တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ၏ အသက်ပေါင်းများစွာကို ပေးလှူခဲ့ကြရသည်။
မဆလခေတ်တွင် တပ်သားများ အခွင့်အရေးများ မရှိတော့ချေ။ သို့ရာတွင် ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပဒုမ္မာပြခန်းဆိုသည့် အထူးဆိုင်များ၊ သီးသန့်ရုပ်ရှင်ရုံများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပြီး တပ်မတော်သားများ ဘဝများစွာ နိမ့်ကျသွားခဲ့ရသည်။ ယနေ့ နအဖခေတ်တွင် မိမိစုငွေကိုပင် မိမိပြန်မရနိုင်သည့် ဘဝသို့ ရောက်နေရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေသမျှ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ပြည်တွင်း စစ်ကြောင့် တပ်မတော်သားများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်သားများ အများအပြား သေကြေပျက်စီးကြသလို၊ ပြည်သူ အသက်ပေါင်းများစွာ မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
ယနေ့ခေတ်အထိ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် လူတသန်း အနည်းဆုံး သေဆုံးခဲ့မည်ဟု မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ဘယ်အရာနှင့်မှ မလဲနိုင်သော လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ပြည်တွင်းစစ်တွင် စတေးခဲ့ရသည်။ ၎င်းပြည်တွင်းစစ်ကို လက်ရှိတပ်မတော်မှ ခေါင်းဆောင် များက အမှန်တကယ် အဆုံးသတ်စေချင်ပါက တိုင်းပြည်ရှိပြည်သူလူထုက ချစ်ခင်လေးစား သော ဒေါ်စုနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်၍ ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။ နအဖခေါင်းဆောင်များ ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ချင်သော သူများ ဖြစ်သလော၊ ပြည်တွင်းစစ်ကို မီးမွှေးနေသူများ ဖြစ်သလော အဖြေထုတ်ရန် အချိန်ကျပြီဟု မြင်ပါသည်။
ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက် လူချစ်လူခင်များသောသူ တဦးမှ မရှိကြောင်း သူမ လွတ်လာသောနေ့နှင့် မိန့်ခွန်းပြောသော နေ့တို့တွင် သိနိုင်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ ပြည်သူလူထု၏ ချစ်ခင် လေးစားမှုကို ခံရသလို တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရရှိထားသည့် အတွက် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကို ဦးဆောင်ခွင့် ရမည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပြန်လည်ဦးမော့လာနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ရှားရှားပါးပါး ပြည်သူထောက်ခံမှု ရရှိထားည့် ခေါင်းဆောင်ကို ဘာလုပ်ပါ၊ ညာလုပ်ပါဆိုတာ မျိုးထက် သူမသိရန်လိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကူညီရိုင်းပင်းခြင်း တို့ဖြင့်သာ ဝန်းရံဘို့လိုပါသည်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဘက်စုံမှ တင်ပြကြ၍ ဆုံးဖြတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို သူမဘာသာ ပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့် သူမ၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ NLD ပါတီအနေနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မိမိအတွင်းစည်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကြားတွင် သဘောထား ကြီးကြီးထား၍ စည်းရုံးခြင်းဖြင့် စတင်သင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် တပ်ပေါင်းစုကြီး ကို ဦးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဦးဝင်းတင်က ဒေါ်စုနဲ့ ပြည်သူတွေနိုင်တယ်၊ ဘီဘီစီက ဒေါ်တင်ထားဆွေကလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေကနိုင်ပြီး စစ်အစိုးရက ရှုံးတယ်လို့ သုံးသပ်သွားပါသည်။ ဒေါ်တင်ထားဆွေက ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူနည်းပါးခြင်းဟာ အစိုးရလုပ်ရပ်ကို အယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုတာကို ပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူး။ မဲမသမာမှု လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ပြည်သူတွေကို နာကြည်းမှု ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဝင်မှု Legitimacy လည်း အားနည်းတယ်။ မဲလိမ်တဲ့ ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အစိုးရကို ဂုဏ်သိက္ခာကျစေခဲ့တယ်။ ထို့အတူ ဝင်ရောက် မဲရွေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်စားတွေကလည်း စစ်အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုကို ကင်းမဲ့စေ ခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကလည်း မပြောက်ကွယ် ဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲသာ လုပ်လိုက်ရတယ်၊ စစ်အစိုးရ အမြတ်မထွက်ပဲ အရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီး ပြည်သူတွေက အနိုင်ရတယ်လို့ သုံးသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ စစ်အစိုးရ တကယ်ရှုံးတယ် မရှုံးဘူးဆိုတာထက် အရှုံး အမြတ်ကို တခဏခြင်း လုပ်ရပ်နဲ့ တိုင်းတာလို့ မရဘူးလို့ ထင်ပါသည်။ အမြတ်ထွက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အတိုက်အခံဘက်မှာ ရှိသလို စစ်အစိုးရဘက်မှာ ရှိတယ်လို့ မြင်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်အစိုးရ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို NLD က အကောင်အထည်မဖော်နိုင်၊ ဖော်ခွင့် လည်းမရတဲ့အတွက် ရေရှည်မှာ NLD ရှုံးတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယ္ခုလည်း မဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေကြောင့်၊ လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ရှုံးတယ်ဆိုရင် နအဖဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ အမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြီး ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အာဆီယံကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ညစ်ပတ်မှုတွေကို ထုတ်မပြောဘဲ ကြိုဆိုပြီး ထောက်ခံလိုက်ပါသည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယမှလည်း လက်ခံလိုက်ပါသည်။ ဥရောပမှ အစိုးရများကလည်း တက်လာတဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆက်လက်ညှိုနှိုင်း သွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဒီလိုညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်နေတဲ့ မသမာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို သိပင်သိငြားသော်လည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်း ၎င်းရွေးကောက်ပွဲကနေ တက်လာမယ့် အစိုးရကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုကြောင်းကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ မပြောခဲ့ကြတာကို သိကြဖို့ ကောင်းပါသည်။
ထိုအချက်က စစ်အစိုးရသည် မည်ကဲ့သို့ ညစ်ပတ်စွာ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြု ဆက်ဆံနေဦးမည်ဆိုတာ သတိပြုမိဖို့ လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ ပလူပျံအောင် ကန့်ကွက်နေသော်ငြားလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံအဆုံး စစ်အစိုးရက လက်ပြောင်းတင်လိုက်တဲ့ အစိုးရသစ်ကို ကန့်ကွက်ဖို့ မရှိဘူး။ ဆက်လက် ဆက်ဆံသွားဖို့သာရှိပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်။ ။၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးသွားသော်လည်း နအဖသည် အာဏာကိုဆက်လက်ယူထားနိုင်သလို ယ္ခု ၂၀၁၀ တွင်လည်း ညစ်ပြီး နိုင်သွားသည့်အခါ အာဏာဆက်လက်ယူထားခြင်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာက မည်သို့မျှ ကန့်ကွက်သွားလိမ့်မည် မဟုတ်၊ ထိုကဲ့သို့ အနိုင်ယူထားခြင်းကို ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက မတိုက်နိုင်လျှင် ဒုတိယမ္ပိ အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကဲဒါဖြင့် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တဖက်မှ ပြောနေသလို နအဖကို တရားစွဲဖို့လည်း လုပ်နေတာ တွေ့ရသည့်အခါ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ မြင်ပါသည်။ နောက်တခုက နအဖခန့်ထားတဲ့ တရားသူကြီး နအဖဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် တရားရုံးတွင် နအဖကို တရားစွဲမည် ဟူသည်က အမှန်တကယ်တော့ အချိန်ကုန်လူပန်း လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ် လည်း မရှိဘူးဟု သုံးသပ်ပါသည်။ တင်းမာရေး လမ်းစဉ်ကို ပြန်သွားနေတယ်လို့ နအဖက စွပ်စွဲမှာ မလွဲပါဘူး။ ထိုလုပ်ရပ်သည် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီး လူ့အခွင့်အရေးကို အခိုင်အမာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူအများက သူတို့ကို အစိုးရက မတရားပြုကျင့်ရင် အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ သူတို့ရဲ့ ခုခံပိုင်ခွင့်အရ အစိုးရကို တရားရုံးမှာ တရားစွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ တရားရုံးများကလည်း အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ၏ အာဏာစက်မှ သီးခြားကင်းလွတ်သည့် တရားရုံးများ ဖြစ်တဲ့အတွက် တင်လာတဲ့ အမှုများကို သမာသမတ်ကျကျ စီစစ်ပြီး အစိုးရက ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်မှု လုပ်သည်ဆိုတာကို ထင်ရှားခဲ့ရင် တရားစွဲသူ ပြည်သူကို အနိုင်ပေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အစဉ်အလာ မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးတွင် မရှိသေးပါ၊ မပေါ်ထွန်းသေးပါ။
NLD ပါတီအနေဖြင့် ထို့ထက်အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတွေ လုပ်ရန် အများကြီးရှိပါသည်။ ပြည်သူထောက်ခံမှု တခဲနက်ရနေသော ဒေါ်စုအနေဖြင့် ပြည်သူများ ပူနွေးတက်ကြွနေသော အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မည်သည့်နေရာ မည်သည့်နေ့ရက် တွင် တရားပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပြီး အနာဂါတ်မြန်မာပြည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် တိုင်းပြည်ကို မည်ကဲ့သို့ ပျိုးထောင်မည်ဟု ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ နအဖကို ပုပ်ခတ်ပြောဆိုမှု မလုပ်ဘဲ မိမိတိုင်းပြည်အပေါ် ဖြစ်စေချင်သော ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ လတ်တလော ဒုက္ခရောက်နေသော ရခိုင်လေဘေး ဒုက္ခသည်များနှင့် နာဂစ် လေးဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီရိုင်းပင်းရန်အတွက် ဖောင်ဒေရှင်းများ တည်ထောင်ခြင်း စသည်တိုိ့ကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ပြည်သူအများ ပါဝင်လာနိုင်သည့် အလုပ်များ၊ လမ်းစဉ်များကို ချပြ၍ Grass Root အောက်ခြေလူထု ၏ (ကိုယ်ထူကိုယ်ထ) မီစံကိန်းများကို ဦးစီးပြုပေးခြင်းဖြင့် NLD နှင့် လူထုအကြား တသားတည်း ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးသင့်ပါသည်။ လူထု သည် တရားပွဲ နားထောင်၍ ပြန်သွားသည့် အနေအထားမျိုး မဟုတ်ပဲ NLD နှင့် ပေါင်းစပ်လက်တွဲလုပ်နိုင်သည့် လုပ်ကွက်များကို ဖန်တီး၍ ဦးဆောင်မှု ပြုရန် လိုပါသည်။ ထို့အတူ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ညှိုနှိုင်းပြီး တူသည့်အရာများကို လက်တွဲလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုးကို လက်တွေ့ကျကျ ကွင်းဆင်း အကောင်အထည်ဖော် ကြရမည်ဖြစ်သည်။ နအဖ မလုပ်ပေးသော မလုပ်နိုင်သော အလုပ်များကို Civic အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့၍ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ Civil Society လွတ်လပ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာရေးကို အားပေးကူညီခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တောင်သူလယ်သမား ၇၅ % ရှိသည့်အတွက် တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံးများ သမဂ္ဂများ ပေါ်ထွက်လာရန် အားပေးကူညီခြင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အားပေးခြင်း၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ပျိုးထောင်ရာတွင် ကူညီခြင်း ထောက်ခံပံ့ပိုးခြင်းတို့သည် ယနေ့ NLD ပါတီ ဦးစားပေးလုပ်ရမည့် အလုပ်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်လျှင် အလွန်ကောင်းမည်ဟု ယူဆပါသည်။
တပ်မတော်တွင် လူအင်အားကို တိုးချဲ့၍ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ နအဖလက်ထက်တွင် မှိုလိုပေါက်လာခဲ့သော်လည်း သာမန်စစ်သားများ၏ ဘဝသည် ဒုံရင်းဒုံရင်း ဘဝမှ မတက်ဘဲ ၎င်းတို့၏ သမီးမယားများ မကောင်းသည့်အလုပ် လုပ်စားရသည့် အနေအထားသို့ပင် အချို့ မိသားစုများ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့် ရောက်ရှိနေခဲ့ကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာရှိ တပ်မတော်သားများ ဘဝနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်သားများဘဝ မြှင့်တင်လာရေး ကိုလည်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက အခွင့်သင့်လျှင် သင့်သလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့ လိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွင် မြန်မာစစ်ဗိုလ်စစ်သားများ အဘယ်ကြောင့် ပါဝင်ခွင့်မရသနည်း၊ မပါဝင်ခဲ့သနည်း စသည်မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုသင့်ပါသည်။ တခြားနိုင်ငံရှိ တပ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ အလံတော်အောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်သော တပ်များအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသလို မြန်မာတပ်များ အဘယ့်ကြောင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်မရသနည်း။ ထိုခဲ့သို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရရှိပါက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် လှည့်လည်သွားလာနိုင်၍ ပညာဗဟုသုတ ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကူညီ စောင့်ရှောက်နေသော တပ်မတော်သားများအဖြစ် ဂုဏ်ယူနိုင်ခွင့်ရရှိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် တပ်မတော်သားများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါသည်။ ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကို တပ်မတော်သားများကလည်း လိုလားကြမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ကိုယ့်တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့် သတ်ဖြတ်နေရသော အလုပ်ကို မည်သည့် မျိုးချစ်စိတ်ရှိသောသူကမျှ လိုလိုလားလား ထောက်ခံအားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနှင့် အများသဘောတူ သည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းအတည်ပြုရန်အတွက် ပင်လုံညီလာခံ ကဲ့သို့သော ညီလာခံကြီးကို ခေါ်ယူဖို့ NLD က ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုသည်။ ညီလာခံ ခေါ်ယူမည်ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပြည်တွင်းစစ်ကို ချုပ်ငြိမ်းစေပြီး တိုးတက်ကြွယ်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသဖြင့် ထောက်ခံပါသည်။ အထူးလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော အလုပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေး ဦးတည်ချက်ကြောင့် တပ်မတော်တွင်းရှိ ကိုယ့်အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေရမှုကို မနှစ်မြို့သော မျိုးချစ်တပ်မှုးများနှင့် အောက်ခြေထု တပ်မတော်သားများ၏ ထောက်ခံမှုကို မလွဲမသွေ ရရှိနိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးကိစ္စကို နောက်တပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသွား ပါမည်။
အခုနောက်ပိုင်း ဖတ်ဖူးတဲ့ ဦးထွန်းအောင်ကျော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေအထဲမှာ ဒီဆောင်းပါးကို သဘောကျဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ် သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအရင်းနှင့် ဖြစ်နေဆဲ ပြဿနာတွေအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြထားတာ သဘောကျ လက်ခံလို့ အာဇာနည်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
November 19, 2010 at 4:24 AM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောစကားက ဘာမှ မဆိုင်ပဲ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားတယ်။ ဒီမိုတွေကတော့ ဘုန်းကြီးတွေကို ကလိမ်ကကျစ်နည်းနဲ့ လှည့်ပတ် စည်းရုံးနေပြန်ပြီ။ ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါဦး
November 19, 2010 at 9:14 AM Reply
November 19, 2010 at 12:05 PM Reply
(ထိုကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ရှားရှားပါးပါး ပြည်သူထောက်ခံမှု ရရှိထားည့် ခေါင်းဆောင်ကို ဘာလုပ်ပါ၊ ညာလုပ်ပါဆိုတာ မျိုးထက် သူမသိရန်လိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကူညီရိုင်းပင်းခြင်း တို့ဖြင့်သာ ဝန်းရံဘို့လိုပါသည်။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသမျှ လက်ညှိးထောင် ခေါင်းညိတ်လုပ်တာကို စည်းလုံးခြင်းလို့ ထင်နေရှာတယ်။ အားလုံး တစ်သံထဲ ထွက်မှ စည်းလုံးတယ်လို့ထင်ရင်. . . . မြောက်ကိုရီးယားလို အဏာရှင် စံနစ်ကို လုပ်လိုက်ပေါ့။ ဆန့်ကျင်တဲ့ စကားပြောသူမှန်သမျှ သတ်ပြစ်ပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒါ စည်းလုံးခြင်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ ငတုံး၊ ငအ ဖြစ်ခြင်းပဲ။ နှစ် ၂၀လုံးလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပဲ ဒိုင်ခံပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ ( တခြားလူတွေက ခေါင်းထဲမှာ ဦးဏှောက်မပါလို့ သူပြောသမျှ လက်ညှိးထောင် ခေါင်းငြိတ်လုပ်နေတာလား? ) သူအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာ NLD က တခြားလူတွေဟာ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒီအမှားကို ဒီမိုတွေက သင်ခန်းစာမယူဘူး။ လမ်းဟောင်းအတိုင်းပဲ ဆက်လျှောက်နေတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ လူအမျိုးမျိုးရှိနေတော့ အတွေးအခေါ်တွေကလဲ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပဲ။ ရောင်စုံ အတွေးအခေါ်တွေဖြစ်နေတာက ဖေါက်ပြန် မှားယွင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါဟာ သဘာဝပါ။ မစည်းလုံး ဘူးလို့ မမြင်ရဘူး။ အတူတူမွေးပြီး ရုပ်ချင်းတူတဲ့ အမွှာပူးတွေတောင် အမြင်ခြင်းတူတာမှ မဟုတ်တာ။ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ စိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ ငတုံး ငအဖြစ်နေလို့ပဲ။
ဒါ့ကြောင့် အမြင်မတူတဲ့သူအချင်းချင်း အပေးအယူလုပ်နိုင်တာကိုပဲ စည်းလုံးခြင်းလို့ အဓိပါယ်ဖွင့်သင့်တယ်။ ဒီမိုတွေက NLD မှတ်ပုံတင်ရေးတုံးကလဲ အမြင်မတူတဲ့သူတွေ အကြား အပေးအယူမလုပ်ပဲ ဦးအောင်ရွှေတို့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ No Vote နဲ့ Vote No တုံးကလဲ အပေးအယူမလုပ်နိုင်ပဲ နောက်ဆုံးအချိန်မှ ထပြီး ကောက်လုပ်ရတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲလဲ အပေးအယူမလုပ်ပဲ NDF ကို ၀ိုင်းပယ်ပြီး ရန်သူလို သဘောထားနေကြတယ်။
တူနဲ့ ဖန်ပုလင်းကို ထုလိုက်သလိုပဲ.. ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတိုင်း ဒီမိုတွေဟာ အတွေးအခေါ်မတူတဲ့သူတွေအကြား အကွဲအပြဲတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ရန်သူတွေလို သဘောထားကြတယ်။ စည်းလုံးခြင်ရင် ဒီမိုတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေ့လာပါ . . . အတွေးအခေါ်မတူတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ဘာကြောင့် အမုံန်းအဃာတတွေ သိပ်ကြီးနေလဲဆိုတာ အဖြေရှာရမယ်။ ပြုပြင်သင့်တာကို ပြုပြင်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀တုံးကလိုပဲ .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပဲ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်စေချင်ရင် . . . . သူသေသွားတယ်.. ဒါမှမဟုတ် အဖမ်းခံရတယ်ဆိုရင် … ဒီမိုတော်လှန်ရေးက .. ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ? ရဲရဲတွေးစမ်းပါ။
မိမိကိုယ်ကိုအားမကိုးပဲ ကယ်တင်တင်ရှင်ရှာသည့် ဒီမိုကြီးများကို ဟားတိုက်နေသည့်
November 21, 2010 at 5:20 PM Reply
November 23, 2010 at 3:05 AM Reply
ကို ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ဆောင်း ပါး ကောင်းတယ်။
ဒေါက်တာဇာနည် ကို ရစရာမရှိ အောင် နှိပ် ကွပ် ခဲ့တာ ကလွဲ လို့အခြားနိုင် ငံရေး အတွေး အမြင် တွေကို သဘော ကျ ပါ တယ်...